Ihotele yaseKruger Shalati yoLoliwe yeyona ndawo intle yoMzantsi Afrika
Ikamva leMiboniso yeFashoni lixhoma kwiBalance phakathi kweNtsholongwane yeCoronavirus
SIsiseko seKruger National Park ngo-1898, kwaye emva koko, ukufakelwa koololiwe ePaki ngo-1920s, iPaki kunye nokuhamba ngololiwe babe nembali edibeneyo. Kufanelekile ukuba uKruger Shalati omtsha, Uloliwe kwihotele yeBhulorho, ihlawula imbali kulembali.
Imiswe eMzantsi Afrika kwaye igqobhoza ibhulorho engaphezulu koMlambo iSabie, iKruger Shalati Train Hotel yi ihotele entle Njengomnye. Indawo eshushu lilinyathelo leQela lezoKhenketho eThebe. Iza namagumbi angama-31, nganye nganye yakhiwe ngaphakathi kwinqwelo kaloliwe yangaphambili. Buzaliswe bubugcisa bendawo kunye nezinto zokwenza izinto ezenziwe ngobuchule eMzantsi Afrika, uyilo lwangaphakathi luyenzelwe ukubhiyozela inkcubeko yalapha.
Uluvo olungenakulindeleka kunye nolungiselelo olwahlukileyo lwale hotele ixabisekileyo yavela ekusebenziseni kwasekuqaleni kwebhulorho. Emva kwemini, kuba kwakungekho ndawo yokuhlala, uloliwe wayepakisha kuloliwe ixesha lobusuku. Oku kwakuvumela abahambi ukuba baphumle ngokufanelekileyo ebusuku ngaphambi kokuba baqhubeke nohambo lwabo ngosuku olulandelayo.
Amagumbi eza nodonga lwegilasi lomgangatho ukuya eludongeni ukuze iindwendwe zikwazi ukonwabela ukumiswa kumda wepaki yelizwe lokuqala. Ngaphandle kwamagumbi aphezulu, iSalati Lodge iyakhukhumalisa isiko. Iindwendwe zinokuphumla kwaye zi-odole isiselo esivela ebhafini okanye siye kuqubha echibini lokugcina elinamhlanje kunye neqela lase-Afrika lezilwanyana zasendle kwiimitha ezingezantsi.
Yabhengezwa ukuba ivule ngoDisemba ka-2019, ihotele kulindeleke ukuba iqale ukwamkela iindwendwe ngoSeptemba walo nyaka.
Jonga ezinye iifoto zehotele eNtofontofo yaseKruger Shalati ...
iihotele Ihotele yaseKruger Shalati Indawo yokuhlala indawo yokuhlala e-Afrika hotele ukhenketho eMzantsi Afrika hamba iindawo zeholide
UCollins Badewa Ngamana 19, 2020
KuJim Iyke, Ukubonisa amadoda ukuba aHamba ngeSitayile kukuBiza